Iingcebiso zokusebenzisa i-Raw Dobutramine I-AASraw I-Fat ilahlekile i powder
Iingcebiso zokusebenzisa i-Dobutramine Raw
/Blog/Dobutramine/Iingcebiso zokusebenzisa i-Dobutramine Raw
ezaposwa ngomhla 04 / 10 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Dobutramine.
Yonke into malunga neDobutramine Powder
1.Yintoni i-Dobutramine Powder isetyenziselwa?
2.I-Dobutramine Powder isebenza njani?
3. Isisombululo seDobutramine Powder
I-5.Dobutramine Umsebenzi wePowder kunye nemiphumo emibi:
I-6.Iimveliso ezichaziweyo Ukuchazwa:
I-7.Dobutramine I-Raw Powder Marketing
Uhlolo lwe-8.Clients ':
9.Buy Genius Dobutramine Ubuninzi obushushu obuvela kwi-AASraw
Ividiyo yeDobutramine Powder
IRaw Dobutramine Isisombululo esisiseko Abalinganiswa:
igama: Dobutramine Powder
I-molecular Formula: C17H26NCl
Isisindo somzimba: 180.28
Yintoni? Ukusuka egameni, kufana nemveliso eqhelekileyo-iSibutramine. Uwuphi umehluko phakathi kwabo? Kule nqaku, sizama ukufumana inyaniso.
1.Yintoni Dobutramine Powder tyenziswa?
Emva kokwenza uphando malunga nale mveliso, sifumene sisetyenziswe njengento yokutya yokulahleka kwesisindo, njengegama layo elifanayo njengeSibutramine. Kukho ubungqina bokuxhasa le ngcamango:
I-Dobutramine Powder, eneendlela ezifanayo ze-sibutramine, igosa elilawulwa ngomlomo ekwenzeni unyanyiso. Uphononongo lubonisa ukuba, le mveliso kunye ne-amine yayo esebenzayo i-metabolin ayibonakali imingcipheko emibi, njenge-resistant-choline, i-histamine-resisting, kunye ne-monoamine oxidase. Umphumo wokulahlekelwa isisindo seBabutramine uhle kakhulu kunobutramine, umphumo waso uncinci, kwaye awukwazi ukufunyanwa.
Igama: I-Dobutramine Powder
Ifomula ye-molecular: C17H26NCl
I-Melt Point: 110.2 ° C
Umbala: I-White okanye i-powder i-white powstalline
Kule nkcazo ngasentla kunye neenhlamvu zeekhemikhali, iyafana kakhulu neSibutramine. Le mveliso ibambelela kwiziyobisi eziphambili zonyango. Ngokuyinhloko ngokusebenzisa i-amine (i-amine kunye ne-Primary Amine) i-metabolites evelise imiphumo, indlela engundoqo yokukhusela i-norepinephrin kunye ne-5-hydroxytryptamine kunye ne-dopamine yokuphindaphinda nokuphuculiswa kwengqondo, ngelixa i-norepinephrine, i-5-serotonin kunye ne-dopamine release release. I-Dobutramine Powder Isisindo sokunciphisa isisindo esilungileyo kuneSibutramine HCl.
Le mveliso ibambelela kwiziyobisi eziphambili zonyango. Ngokuyinhloko ngokusebenzisa i-amine (i-amine kunye ne-Primary Amine) i-metabolites evelise imiphumo, indlela engundoqo yokukhusela i-norepinephrin kunye ne-5-hydroxytryptamine kunye ne-dopamine yokuphindaphinda nokuphuculiswa kwengqondo, ngelixa i-norepinephrine, i-5-serotonin kunye ne-dopamine release release.
(1) I-Dobutamine iyisisulu se-sympathomimetic esetyenziswe kunyango lwenkohlakalo kunye nokutshatyalaliswa kwemizimba.
(2) I-Dobutamine isetyenziselwa ukhathaza ukuhluleka kwentliziyo, kodwa inokuba yinto eyenzeka ngexesha lokuhlinzwa kwentliziyo okanye kwiimeko zesifo se-cardiogenic, ngenxa yesenzo salo se-inotropic esihle.
(3) I-Dobutamine ingasetyenziselwa kwiziganeko zokwahluleka kwentliziyo ye-congestive ukwenzela ukwandisa umkhiqizo wentliziyo. Kuboniswe xa unyango lwe-parenteral luyimfuneko kwi-inotropic inkxaso kwinyanga efutshane-nonyango yezigulane ezinokuphelelwa yintliziyo ngenxa yokunyaniseka kwengxaki, okungaba ngumphumo weengxaki zesifo senhliziyo okanye iinkqubo zonyango. Akunakuncedo kwisifo senhliziyo yesichemicic ngenxa yokuba yandisa izinga lentliziyo kwaye ngoko kwandisa imocardial oxygen demand.
3.Isilinganiselo Dobutramine Powder
Ukusetyenziswa: esetyenziselwa ukutya kunye nokuzivocavoca kunokunciphisa nokulawula unyango wokunyanya ukunyameka. I-index ye-mass index (BMI) yayingu-30 kg / m2, okanye i-28 kg / m2 ngexesha elifanayo kunye nezinye izinto ezinobungozi ezifana nesifo sikashukela, i-dyslipidemia kwizigulane ezinobunzima, njl. Qaphela: i-BMI (kg / m2) = ubunzima (kg) / ubude besikwele (m2). Umgca weMpuma Umgaqo-nkqubo we-QuMing ulingana nentshonalanga uthatha i-Ming, kodwa i-sibutramine ehambelana nokuvavanya ixabiso lokulahlekelwa kwindleko, izongezo kunye nemicimbi efuna ukunakwa kunye ne-hydrochloric acid.
Ukusetyenziswa kunye nemilinganiselo: i-dose ephakanyisiweyo yamachiza imihla ngemihla i-1, i-10 mg, kwaye kusasa kunye nesidlo sasekuseni kuphela kuthatha okanye ngexesha elinye. Ukufana nokulahleka kwesisindo akusobala, iiveki ze-4 emva kwendleko zinganyuswa ukuya kwi-15 mg imihla ngemihla, ukuba izigulane azikwazi ukunyamezela i-10 mg / umthamo wemihla, ingahlahlela kwi-5 mg / ngosuku. Musa ukucebisa ukusebenzisa i-15 mg / imini ngaphezu kwedosi.
Ikhutshwa kakhulu yi-metabolites ye-amine (i-amine yesibini kunye ne-amine), indlela eyona nto yayikukuvimbela ukungena kwe-norepinephrin, i-serotonin kunye ne-dopamine kwaye kwandiswe ukunyuka, kodwa kwakungekho mpe mbelelo ebalulekileyo kwi-norepinephrine, i-serotonin kunye ne-dopamine release.
Ukunyuselwa komlomo kwakunokukhawuleza, umyinge wesilinganiso ube ngu-77%, ukuxilongwa kwegazi kwafika ngexesha eliphakamileyo leeyure ze-1.2, izinga lokukhutshwa komlomo lalingu-1750l / h kunye nesiqingatha-ubomi kwakuyieyure ze-11.
I-cytochrome yesibindi i-P450 (3A4) Isoenzyme yayisetyenziswe ngumsebenzi woku-oda wokuqala wokuqala njenge-metabolite ye-bioactive ye-M1 kunye ne-M2, eneemetabolites ze-pharmological M5 kunye ne-M6.
Ukuxinwa kweziyobisi kunye ne-metabolites yayo kwi-plasma kunokufikelela kwinqanaba kwii-3-4 iiyure emva kokuthatha iyeza, ukuxilongwa kwe-plasma ye-M1 kunye ne-M2 kwiintsuku ze-4 ngokukhawuleza, kwaye ukuxinwa kabini kwimizuzu ephindwe kabini. Imilinganiselo yokusetyenziswa: Kunconywe umlinganiselo ngamaxesha e-1 ngosuku, kanye ne5-10mg. Ukuba ukulahleka kwesisindo akucaci emva kokuba iiveki ze-2 zinyuswe kwi-15-20mg isilinganiselwa.
1). Sibutramine hydrochloride powder Amagama:
I-Sibutramine hydrochloride powder ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yiSibutramine hcl, iSib, iMeridia ngabaxhasi bomzimba okanye abakwaGGL.
2) .Sibutramine hydrochloride powder Ukusetyenziswa:
I-Sibutramine hydrochloride isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengamacwecwe okanye iifomsile zomlomo, kwi-15mg / ithebhu, 20mg / ithebhu, 30mg / ithebhu. Kwezinye iifemu zase-Asia zasemzantsi, ziyisebenzisela ukwenza ukulahleka kwekhofi okanye itiye.
I-futramine i-HCL powder ine-formula ye-molecular C17H27C12N kwaye iyigoda elimhlophe ngokubonakala. I-99% ecocekileyo kwaye iyasebenza kakhulu ekulahlekeni kwesisindo. Oku kuncedisa ekulahlekeni kwesisindo ngokuguqula ama-neurotransmitters kwingqondo eyimichiza ekhutshwe ngongqondo ngokulungelelanisa phakathi kwe-neurons. Esi sigxina sivimbela ama-neurotransmitter njenge-norepinephrin, i-dopamine kunye ne-serotonin, ephazamisa ukulungelelaniswa kwe-neuronal. Oku kuvimba kukunceda ekutshintsheni i-cholesterol metabolism ephumela ekulahlekeni kwesisindo.
Oku kusebenza kuphela xa umntu ethatha iyeza nge-calorie ephantsi kwaye ngokuqhelekileyo umsebenzi uyacetyiswa ngugqirha. Elinye ipilisi ye-brand ephakanyisiweyo kunye nefom yefom yefom yezantsi ifunekayo ngosuku. Ngokuqhelekileyo, akukho miphumo echaphazelekayo ephawulwayo kodwa oku kumluthayo, ngoko umntu osebenzisa eli chiza kufuneka alumke aze azame ukungathembeli ngokupheleleyo kulo.
3). Isilumkiso kwi-meridia ye-hcl powder eluhlaza:
Ngokugqithisileyo kwandisa uxinzelelo lwegazi kunye nokwanda kwe-pulse kubasebenzisi abathile, ngokukodwa xa kuqaliswe kwi-dosages ephezulu. Ukubekwa kweliso lwexinzelelo lwegazi kunye ne-pulse efunekayo ngaphambi nangamaxesha athile ngexesha lotyando. Ukuqwalaselwa kokunciphisa umthamo okanye ukuyeka ukucetyiswa kwizigulane ezinokwanda okuqhubekayo kwimixinzelelo yegazi okanye izinga lokutshiza.
Yeka ukusebenzisa i-sibutramine uze ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba unesiphumo esicacileyo solu hlobo:
ukukhawuleza, ukukhawuleza, okanye ukungahambisani nentliziyo;
olutsha okanye ukuphefumula okufutshane;
ukuphazamiseka, ukuguqulwa, ukukhulelwa, ukuyikima, ukucinga ngokugqithiseleyo, ukuncwina, ukuhlanza, isifo sohudo, ukulahlekelwa koqhagamshelwano, abafundi abancinciweyo;
ezinzima kakhulu (eziqinileyo), isifo somkhuhlane, ukuthuthumela, ukudideka, uvakalelwa ngathi unokudlula.
umlomo owomileyo, isisu esicasulayo;
ukutyunjwa, intlungu yesisu;
intloko, intlungu emva, intlungu edibeneyo;
uziva unesifo, udizzy, okanye ucinezelekile;
izimpawu zomkhuhlane, i-pitny okanye impumlo ephothiweyo, umqala, umkhuhlane;
ukufudumala, ubomvu, okanye ukuvakalelwa kwengqondo phantsi kwesikhumba;
ingxaki yokulala (ukulala); okanye
4) .raw Sibutramine hydrochloride powder Imiyalelo eyongezelelweyo:
(1). Amaqabunga amazambane adibeneyo, amaqabunga e-lotus, iifowuni yekhofi kunye nezinye izitshalo zityalo, ezo zicatshulwa zezityalo ziyizinto ze-alkaline, kunye ne-sibutramine i-hydrochloride yokusetyenziswa, i-acid-based neutralization, ukunciphisa okanye ukukhokelela ekulahlekeni kwemithwalo yemveliso ukungazinzi.
(2). Ukusetyenziswa ngokuthe ngqo kwe-sibutramine hydrochloride, umxholo ngamnye we-capsule 10-30mg.
(3). Kusuka kwi-pharmacy, Kunconywa ukuba ukusebenzisa iswekile yamagilebhisi kunye ne-sibutramine hydrochloride i-capsules edibeneyo, i-dose ephakanyisiweyo ye-15mg.
Ukukhawuleza emva kokulawulwa komlomo; iqhubela phambili i-metabolism ehamba phambili kwindawo yesibindi yokwenza i-metabolites esebenzayo kunye ne-dimethyl esebenzayo (M1, i-amine yesibini, kunye ne-M2, i-amine ephambili, ngokulandelanayo). I-Absolute bioavailability ayifumanekanga, kodwa iziphumo zokulinganisela ibhalansi zibonisa ukuba ubuncinane i-77% yomtya omnye womlomo uyangena.
Ukutya kukhulisa ixesha lokunyusa ingqwalaselo ye-plasma kunye nokunciphisa ukuphakama kweplasma ye-desmethyl metabolites malunga neeyure ze-3 kunye ne-30%, ngokulandelanayo, kodwa ayichaphazeli indawo phantsi kwee-curves time-curves curves (AUCs) ze-methemol metabolites.
I-meridiya i-hcl powder ayifanele ibekwe kuze kube yimiba ebangela ukukhuluphala, njengokuba ingaphendulwanga i-hypothyroidism, ikhutshwe ngaphandle.
Kwiibanga ze-sibutramine zokunyamezela kweenyanga ze-6 okanye ixesha elide, izigulane ezalahlekelwa ubuncinane ubunzima be-1.8 kg (ii-4 iipounds) zesisindo somzimba ngexesha lokuqala kweeveki ze-4 zonyango kakhulu kunezigulane ezilahlekelwe ngaphantsi kwalokhu ukuze zilahleke ubuncinane i-5 % yesisindo somzimba sokuqala kwiqondo elithile. Ukuba isiguli asilahlekanga ubuncinane i-1.8 kg (ii-4 iipounds) kwiiveki zokuqala ze-4 ze-sibutramine unyango, unyango kufuneka luhlolisiswe kwakhona kwaye ibholithi ye-sibutramine kufuneka yonyuswe, okanye ibasebenzisi lika-sibutramine kufuneka liyeke.
Ukusetyenziswa kakubi kwe-sibutramine kuye kwafunyaniswa kakhulu kwi-rat kunye nezifundo zabantu ezenzelwe ukuvavanya ukusetyenziswa kokusetyenziswa kakubi njenge-psychostimulant kunye nezifundo zokulingana ezilungiselelwe ukuvavanya ukusetyenziswa kakubi njenge-hallucinogen.
5). meridia hcl powder:
Kuba i-sibutramine HCL esuka kwi-AASraw, kukho iindidi ezimbini ze-powder eluhlaza.
Umbala omnyama we-brown awukwazi ukufunyanwa ngu-HPLC okanye ezinye iindlela.
Umpu omhlophe awukwazi ukufunyanwa nguHPLC okanye ezinye iindlela.
I-powder white e-crystalline ingabonwa yi-HPLC okanye ezinye iindlela.
6). meridia hcl Ukupheka kwePowder:
I-capsule: I-20-40mg ye-sibutramine i-hcl powder eluhlaza itholakala kwiimarike.
Iipilisi: Ukudibanisa kunye nevithamini okanye iSenna ukwenza i powder iphumelele kakhulu. Ukufumana iinkcukacha, nceda uqhagamshelane ne-CSR yethu.
I-Teal / Ikhofi encinci: I-sibutramine engabonakaliyo i-hcl ipukishe eluhlaza iyadingeka, enokuqinisekisa ukuba izinto ezixubekileyo ze-slim no-sibutramine hcl zifunyenwe. I-dosage, ngokuqhelekileyo kwi-28-35mg.
I-injection: Kuvezwa kwezinye iilabhu zangaphantsi i-sibutramine i-hcl yamanzi yenziwe kwi-1.0-4.0mg / ml.
I-Babutramine, eneendlela ezifanayo ze-sibutramine, igosa elilawulwa ngomlomo ekwenzeni unyanyiso. Isebenza ngokugqithiseleyo ngokusebenzisa i-metabolin ye-amine? I-amine yesi-amine kunye ne-amine ephambili ?, indlela yayo eyona nto ikwandisa ukuvakalelwa kwe-noradrenalin, i-serotonin i-5-HT kunye ne-dopamine, nangona kunjalo ayikho into ebonakalayo ukukhululwa kwe-noradrenalin, i-serotonin i-5-HT kunye ne-dopamine. Uphononongo lubonisa ukuba, le mveliso kunye ne-amine esebenzayo i-metabolin ayibonakali imingcipheko emibi, njenge-resistant-choline, i-histamine-resisting, kunye ne-monoamine oxidase. Isiphumo sokulahlekelwa isisindo sikaBabramram sinokugqwesa kunokuba sibutramine, isiphumo salo sincinci, kwaye asikwazi ukufunyanwa. Izifo ezithintekayo: Isetyenziselwa ukunyanga ubukhulu bokuthi ubunzima abukwazi ukulawulwa ngokutya nokulawulwa kwezemidlalo .
1. Lowo uthatha i-monoamine oxidase inhibitor.
2.wowo uthatha amayeza anorectic esebenza kwi-nervus centralis
3.Lowo unobungozi obushushu
4.Lowo uhlaselwa kulo mveliso.
Uxinzelelo lwe-5. Umtya wegazi uhlaselwa ngumxinzelelo wegazi onzima ukulawula kwaye awukwazi ukulawulwa
6.Lowo unesifo sesifo senhliziyo, ukungaphumeleli kwentliziyo, u-arrhythmia kunye ne-apoplexy.
7.Lowo unobulwelwe obukhulu besifo kunye nesifo sesifo.
Ukubonakala: I-White Crystalline powder
Uluhlu oluxubileyo: 190-201 ℃
Iimpawu ezinzima: 10 PPM Max
I-Assay: 99.0% Min
Ukungcoliswa ngalunye: 0.2% Max
Ubutyebi Bonke: 0.4% Max
Ukuhlala kwisalathiso: 0.1% Max
I-TLC: Indawo eyodwa kuphela
Isisindo sokunciphisa isisindo esilungileyo kuneSibutramine Hcl
7.I-Dobutramine Raw Powder Marketing
Le ngxelo ibhekiselele ebalulekileyo kubani abafuna ulwazi olunzulu malunga ne-Japan Dobutramine Powder market. Ingxelo ibandakanya iinkcukacha kwiimarike zaseJapan eziquka iimpawu zembali kunye nexesha elizayo lokubonelela, ubungakanani bemarike, amanani, ukurhweba, ukhuphiswano kunye nexabiso lexabiso kunye nolwazi olukhulu lwabathengisi baseJapane.
Ukongeza kwinqutyana yedatha, ingxelo kwakhona inikezela ngokubanzi ummandla we-Dobutramine Intengiso yee-Powder, kubandakanya ukuhlengahlengiswa, isicelo, iteknoloji yokuvelisa, uhlalutyo lwe-chain chain kunye ne-recent market dynamics.
Ekugqibeleni, ingxelo yokwenza ngokwezifiso ukwenzela ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzisi ikhoyo kwakhona.
I-Dobutramine Market Market Report inikeza uhlalutyo olubanzi njengoko kulandelayo:
Amacandelo eemarike kunye namacandelo amancinci
Ubungakanani bemakethe kunye namasheya
Iimpawu zeemarike kunye neenguquko
Abaqhubi bemarike kunye namathuba
Ukufakelwa kwezobuchwepheshe kwi-Dobutramine Powder industry
Umthamo woPhuhliso lweZiteshi zoThengiso
I-Dobutramine Intengiso yeePowder
Uluhlu lwabathengisi / abaThengisi baquka kwiDobutramine Market Powder
Uhlalutyo lwe-Dobutramine lwePowder uhlalutyo lwentengiso, umthengi ufumana ulwazi oluxabisekileyo malunga ne-Dobutramine yokuveliswa kwePowder kunye nesabelo sayo semarike, Imali engenayo, Intengo kunye neMarrha epheleleyo, Ukuthengiswa, Ukusetyenziswa, Ukuthumela ngaphandle, Ukungenisa umthamo kunye nemilinganiselo yeeNdawo ezilandelayo:
** Uluhlu lwezoqoqosho olunzulu lubandakanya uhlalutyo lwexabiso lohlalutyo lwexabiso, u-porter ohlalutyo lwenkxaso-mzekelo yamandla kunye nokuhlaziywa kweendleko zexabiso
** Ingxelo ibandakanya imarike yaseJapan yeDobutramine Powder
** Ichaza imeko ekhoyo, imvelaphi yembali kunye nexesha elizayo
Idatha epheleleyo ebonisa i-Dobutramine Amandla okunyusa, ukuveliswa, ukusetyenziswa, ukubalwa kwamanani, kunye namanani kwiminyaka yakutshanje inikwe
** Ingxelo ibonisa ubutyebi beenkcukacha kwi-Dobutramine Powder manufacturers
** I-Dobutramine Inkcazo yemveliso yemveliso yemveliso kwiminyaka emihlanu ezayo, kubandakanywa inani lemarike kunye namaxabiso anikezelwa
** Ukunikezelwa kwezinto ezibalulekileyo kunye neNgcaciso yabathengi abaNcinci kuhlanganisiwe
** Nayiphi na iimfuno zomsebenzisi ezinokwenzeka ngathi
Ngaloo ndlela, ingxelo ye-Market ye-Dobutramine yePowder market inikeza uhlalutyo olunzulu olubandakanya yonke imimandla emikhulu, abakhuphisanayo, kunye neenkalo ezinamandla kwi-Dobutramine Powder industry.
Ndithenge ku-Ali Baba ndathenga i-50 grams kunye ne-Olistatit, eyayigcwele iifomsile. Kodwa i-Olistat iyanambitha ingabi yindoda ye-Indiya kunye ne-Inningman, esitshisa amafutha, ikhuphe iphoyinti elingavaliyo. I-Dobutramine Powder ayikwazi ukuphendula. Nangona ndiphindwe kabini umyinge. Ngaphandle kokulahlekelwa kwesisindo, ndandidla. Ngaba ngaba ngenxa yamagciwane? Kwenzeka njani ngaphandle komphumo?
Igama lesiGrike: I-Dobutramine Powder
Igama lesiNgesi: I-Dobutramine Powder
Inkcazo yokupakisha: 5kg
Umntu: umhlophe okanye umgqomo omhlophe omhlophe Le mveliso yinkxalabo enkulu yokunyanga ukunyamezela. Ikhutshwa kakhulu yi-metabolites ye-amine (i-amine yesibini kunye ne-amine), indlela eyona nto yayikukuvimbela ukungena kwe-norepinephrin, i-serotonin kunye ne-dopamine kwaye kwandiswe ukunyuka, kodwa kwakungekho mpe mbelelo ebalulekileyo kwi-norepinephrine, i-serotonin kunye ne-dopamine release. I-pharmacokinetics yayifumene ngokukhawuleza, umthamo wesilinganiso ubuncinane ubuncinane be-77%, ukuxilongwa kwegazi kwafika ngexesha eliphakamileyo leeyure ze-1.2, izinga lokukhutshwa komlomo lalingu-1750l / h kunye nesiqingatha-ubomi beeyure ze-11. I-cytochrome yesibindi i-P450 (3A4) Isoenzyme yayisetyenziswe ngumsebenzi woku-oda wokuqala wokuqala njenge-metabolite ye-bioactive ye-M1 kunye ne-M2, eneemetabolites ze-pharmological M5 kunye ne-M6. Ukuxinwa kweziyobisi kunye ne-metabolites yayo kwi-plasma kunokufikelela kwinqanaba kwii-3-4 iiyure emva kokuthatha iyeza, ukuxilongwa kwe-plasma ye-M1 kunye ne-M2 kwiintsuku ze-4 ngokukhawuleza, kwaye ukuxinwa kabini kwimizuzu ephindwe kabini.
①Ungapheli kwesifo isiguli
②Hytentension, isifo somntu wesifo sikashukela: Isilinganiselo esilinganisiwe kukuba kuthathe amaxesha e-1 ngosuku, kanye ne5-10mg. Ukuba ukulahleka kwesisindo akucaci emva kokuba iiveki ze-2 zinyuswe kwi-15-20mg isilinganiselwa.
9.Thenga i-Genius Dobutramine i-Raw Powder kwiAASraw
I-Doibutramine / Dobutramine yethu Powder yinkqubo yonyango yokusetyenziswa kweziyobisi. Ngokuyinhloko ngokusebenzisa i-amine (amaminithi asekondari kunye nama-primine amine) i-metabolites inempembelelo, indlela eyona nto yokukhusela i-norepinephrin kunye ne-5-serotonin kunye ne-dopamine iphinda ivuselele kwaye ikhulise i-satiety, kunye ne-norepinephrin, i-5-serotonin kunye ne-dopamine ukukhululwa akukho mpawu. Abaxhasi bangasebenzisa le Doibutramine / Dobutramine Powder kumaxabiso atshaba phambili avela kuthi.
I-Dobutramine Powder yisisisithi sokwelapha ukukhuluphala kwiziko eliphakathi, eliphuhliswa ngesiseko seSibutramine. I-Dobutramine Powder esemgangathweni ifana neSibutramine. Kodwa xa kuthelekiswa neSibutramine, umbane we-Dobutramine we-Powder umphumela wokulahlekelwa kwesisindo ophezulu kwaye uphantsi komphumo, kwaye uninzi, awufumaneki. Emva koko, uhlobo olutsha lwezinto ezilahlekileyo.
Umntu: I-Dobutramine Powder ngumkhiqizo ophuhliswe ngesiseko seSibutramine, epholileyo emhlophe okanye ebomvu, engenawo amanzi kunye ne-ethanol. Imibuzo engakumbi nge-sibutramine, nceda uqhagamshelane nathi.
Izinto ze-20 ezibaluleke kakhulu Ufuna ukwazi nge-Lorcaserin HCL powder	I-Avanafil powder Ukuthelekiswa ne-Viagra kunye ne-Cialis powder ye-Treatment ED